पिल्लाको लागि कुन आकारको कलर? - शेन्ज़ेन TIZE टेक्नोलोजी कं, लि।
जब तपाइँ नयाँ कुकुर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँको कुकुरको लागि बिल्कुल नयाँ कलर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँले के खोज्ने भनेर धेरै राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ।
अधिकांश व्यक्तिहरू कलर वा रंगको प्रकारलाई ध्यान दिन्छन्, तर उत्तम आकार चयन गर्नमा मुख्य विचारहरूमध्ये १। तपाईंको कुकुरसँग पहिचान कारणहरूको लागि प्रशिक्षण कलर हुनुपर्दछ, साथै तिनीहरू हिड्ने बेला आश्चर्यजनक रूपमा उपयोगी छन्।
मुद्दा उठेको छ, जबकि, सही आकार छनौटमा। यदि यो धेरै ठूलो छ भने यो खस्नेछ। तर यदि यो धेरै सानो छ भने, यो पीडादायी हुन सक्छ। यहाँ तपाईंको पाउचको लागि सब भन्दा राम्रो साइज डग्गी कलर छनौट गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू छन्।
जातलाई विचार गर्नुहोस्
भर्या .मा पहिलो दाग सबैभन्दा उत्तम साइज डग्गी कलर छनौट गर्नु भनेको तपाईंको पपुको जातको बारेमा सोच्नु हो। तपाईंले अवलोकन गर्नुहुनेछ कि केहि कलरहरूसँग लेबलहरू उनीहरूलाई अनेक जातका लागि सिफारिश गर्न सक्दछन्, र यो केवल आकार भिन्नताका कारण हो।
याद गर्नुहोस् कि नस्लमा पूर्वानुमान गरिएको कलर छनौट पर्याप्त छैन किनकि हरेक कुकुर फरक छ। जे होस्, तपाईले यी कलरहरूलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा आकारहरूको सही चयन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको घरपालुवा जनावर भित्रै आउँदछ।
यदि तपाईं केवल प्रजातिको जानकारीमा आधारित हुन सक्नुहुन्न भने, तपाईं कसरी आफ्नो प्याचको लागि उत्तम फिटिंग कलर प्राप्त गर्नुहुनेछ? सरल उत्तर स्पष्टतः यसलाई मापन गर्न को लागी हो। तिनीहरूको घाँटीको परिधि हेर्न तपाईंले कपडा नाप्ने टेप प्रयोग गर्नु पर्छ।
सामान्यतया भन्नुपर्दा, यो मापनबाट कलर साइज प्राप्त गर्न, सानो जातका लागि १ इन्च (जुन १० पाउन्ड भन्दा कमको वजन हुने), मध्यम आकारको कुकुरको लागि २ इन्च र ठूलो नस्लका लागि inches इन्च जोड्नुहोस् (जुन पहिले उल्लेख गरिएको 80० पाउण्ड तौल हो )। यी अझ धेरै ईन्चले पनी यो सुनिश्चित गर्दछ कि कलर पनि तपाईको आफ्नै घरपालुवा जनावरमा कडा हुन सक्दैन, त्यसले दु: ख वा चोट पुर्‍याउन सक्दछ।
दिल मा फर राख्नुहोस्
सुविधाजनक रूपमा आफ्नो कुकुरको घाँटी मापन गर्न को लागी एक कुशल फिट संग एक कलर पर्याप्त छ; तपाईंले थप भुलि अवधि विचारमा राख्नु पर्छ।
यदि तपाईंको कुकुरसँग धेरै समय कपाल छ र सामान्य हेयरकटहरू छन् भने, तपाईंले कुकुरलाई चाँडै मापन गर्नु पर्छ। त्यस अवस्थामा विश्लेषण १ मा यो मापन तपाईं पाल्तु जनावर कुकुर प्राप्त गर्न को लागी लिनु पहिले तयार (अतिरिक्त १- 1-3 ईन्च समावेश सम्झना)।
जब तपाईं कलरहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईं फेला पार्न चाहानुहुन्छ जो समायोज्य छ र यी दुवै मापन फिट गर्दछ जुन यो दर्शाउँछ कि तपाईंको कुकुर सम्भवतः आरामदायी हुन सक्छ जुन कुनै पनि समय फर शेरीको अवधिमा कुनै पनि समयमा।
डोन € Miss t मिस: पालतू कुकुर कलर दुर्घटनाहरू रोक्दै
के कलर चौड़ाई विषय हुनेछ?
कलरहरू हेर्दा, तपाईंले अवलोकन गर्नुहुनेछ कि अब त्यहाँ भिन्न आकार लम्बाइ मात्र छैन तर विभिन्न चौडाइहरू पनि छन्। सामान्यतया, बाक्लो कलरहरूले अधिक समर्थन प्रदान गर्दछ, तिनीहरूलाई अधिक शक्तिशाली क्यानिनहरूको लागि आदर्श उत्पादन गर्दछ। ठूला कलरहरू त्यस्तै सुविधाजनक छन् किनकि तिनीहरूले घाँटीमा तनाव कम गर्दछ।
जे होस्, यसको ख्याल राख्नुहोस्, फराकिलो कलरहरूले बढी तौल गर्न सकीन्छ, साना नस्लहरूको लागि नराम्रो निर्णयको लागि। यदि तपाईं आफ्नो कुकुरको शक्तिको बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाईंको उत्तम विकल्प निश्चित रूपमा एक प्रशिक्षण कलरको साथ जानका लागि हुन्छ जुन सामान्य १ 1 भित्र हुन्छ। चौडाई।
यदि तपाईं नयाँ पपीको लागि कलरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जुन अझै बढ्दै छ भने, म जहिले पनि समायोज्य छनौट गर्दछु। निश्चित हुनुहोस् कि कॉलर स्तरको सानो छेउमा भेट्छ त्यसैले पपीको घाँटी बढ्नको लागि त्यहाँ धेरै स्थान हुन्छ। यसको मतलब तपाईंले समयको साथ कलरहरूमा निश्चित रूपले पैसा खर्च गर्नुपर्दैन।
Donâ € Miss t मिस: एक पट्टा बारेमा पुलिंग को लागी सर्वश्रेष्ठ पुप कॉलर
नियमित रूपमा कलर जाँच गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो पिल्लालाई नाप्नुभयो र सबै कुरा चयन गर्नुभयो जुन तपाईंलाई लाग्छ सब भन्दा ठूलो कलर हो, तपाईं अहिले सम्म सक्नुहुन्न। यस समयमा तपाईंले आफ्नो पाल्तु जनावरमा प्रशिक्षण कलर प्रयास गर्नुपर्नेछ। तपाइँ निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि यसले तपाइँको कुकुर आरामसँग फिट गर्दछ र धेरै ढीला वा टाँसिएको छैन।
एक सामान्य दिशानिर्देश यो हो कि यदि यो कुकुरको सानो प्रजाति हो भने तपाईं यसको भित्र एउटा औंला मिलाउनको स्थितिमा हुनुपर्दछ; यदि यो कुकुरको एक मध्यम प्रजाति हो भने तपाईं २ लाई भेट्ने स्थितिमा हुनुपर्दछ, र यदि यो ठूलो जातको हो भने तपाईंले फिट हुने स्थितिमा हुनु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईंको कुकुर सामान्यतया आरामदायक छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो र यदि हो, तपाईंले सही आकार छान्नु भएको छ।
यदि तपाईं अझै पक्का कुन कलर किन्नुहुन्छ भनेर अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो पशु चिकित्सकलाई आफ्नो घरपालुवा जनावरबारे कुरा गर्नुहोस् र कुन कलर उत्तम हुनेछ।
ई-मेल: [email protected]tize.com.cn